Dumarka, Diinta iyo Aragtideenna | Doodwadaag waa Danwadaag.
Haddii aan Muslim nahay wax badan baa naga khaldan markii loo kaco dumarka, diinta iyo sida aan wax u aragno. Tusaale, Diinta waxaa qaabilsan ragga, dumarka kaalinta ay ku leeyahiin, waa in la wacdiyaa, oo looga oohiyaa iyo in sadaqo laga gurtaa kadib markii looga oohyio oo la yiraahdo “Adinka ayaa Naarta ugu badan”. Waxaa hubaal in Islaamku siiyay haweenka kaalin baaxad leh oo ku aaddan inay buuxiso, kaalintaa oo aanan ka dhicin tan ragga buuxiyaan ” وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ”
Doodda ugu weyn waxay ka jirtaa shaqada dumarka iyo waliba gaar ahaan arrimaha la xiriira in codkeeda la maqlo. Waxaan leennahay wariyayaal dumar ah oo si talantaalli ah u la qaata meerinta warka ragga, balse ma siinno hablaheenna inay kaalin ku yeeshaan arrimaha ugu fiican ee la xiriira diinta, taas oo ay uga maarmi lahayd inay nashaadkeeda u weeciso meelo kale oo nolosha ah.
Iswaydiini ma xumee, maxaa diiday in la helo gabdho Quraan akhriya oo kamid noqda naadiga ragga u gaarka ah ee Quraan akhrinta. Jawaabta dadka qaar igama daahsoona, oo waxay qabaan in codkeedu cawro yahay, balse, dooddaasi ma aha mid hor istaagi karta daliillada diinta islaamka iyo dhaqankii muslimiintii hore ee aanu ka dhaxalnay diintaan. Dadkaasi waxay lahaayeen haween culimo ah oo diinta laga dugsado. Kuwo ku takhasusay Quraanka iyo aqoontiisa, kuwo bartay Sooyaalka Nabiga iyo kuwo koobay cilmiyada kala duwan ee Islaamka.
Dad inaga mid ah ayaa ku doodayay qarniyadii la soo dhaafay in sababta Muslimiinta dib u dhigtay ay tahay diinta oo aan lagu dhaqmayn. Aniga waxaan qabaa in mushkiladu ahayn diinta oo la raaco iyo in kale, ee uu dhibku yahay “Waxa aanu diin u naqaan maalmahaan inaanu waydiimo badan iska waydiinno”. Maxaa diin ah, maxaase ahayn?
Ka warrana; haddii aanu ka fognahay tubtii Nabiga, Saxaabada iyo dadkeenii hore isla markaana aanu sheeganayno inaanu harsanayno hadhkoodii, balse aan fadhinno qorrax?. Mala-awaalkaa ayaan ahayn mid wax na taraya hadda iyo tan danbeba.
Waxaa akhrin mudan buugga uu qoray Sheekh Xasan Al- turaabi ee magaciisu yahay “المرأة بين الأصول والتقاليد”. Waana tallaabo bogaadin mudan oo ku aaddan sidii loogu garsoori lahaa dumarka loona garan lahaa kaalintooda.
Ujeedka qoraalkan ayaa ah in dumarku dareemaan kaalintooda kana soo dhalaalaan. Ku koobista kaalinta dumarka in faraantiyada iyo jijimaha laga la baxo iyo looga ooysiiyo, waxay marin habaabinaysaa hanuunka ku aaddan dumarka ee Islaamka.
Waxaan qoraalkan ku doonayaa in naadiyada naga wada dhaxeeyo ee ragga kaliya joogaan meesha ka baxaan, oo diinta masuuliyaddeeda la wada-qaato sida aayadda koreba tibaaxayso. Waxaanu ognahay in Quraanka barashadiisa iyo akhrintiisaba ay gabdhaha la wadaagaan wiilasha inta ay yaryar yahiin, balse meel dhaxe ayaa lagu waayaa gabdhahii oo waxaan maqlnaa Qaari hebel, dib uma maqalno gabdhahii kaalimaha sare ka gali jiray, oo ma maqalno Qaari’ah heblo!!
FG: Hoos waxaan ku soo lifaaqay Quraan akhris ay samaynayso gabar Malaysiyaan ah oo codkeeda uga yaabiyay dunida Muslimka.